Kubata kubva paWiricheya - Mawiricheya Anowanikwa Bindu
Kudyara wiricheya yako kunokubvumira kudyara maruva aunofarira, kurima maruva matsva ekubika uye kungonakidzwa nekunze.
Kuti uve neruzivo rwakanaka kwazvo rwekurima gadheni iwe uchafanirwa kuongorora kugona kwako, kuziva miganhu yako uye kuti gadheni rako rakagadzirwa sei. Hapafanire kuve nechinhu mubindu icho chinokutadzisa iwe kushanda mubindu. Bindu rako rinofanirwa kutakura zvaunoda. Kana ikasaita iwe hausi kuzove unogadzira uye zvinogona kutora kubva kune chako kunakirwa.
Nzira dzekufamba dzinofanira kunge dzakafara zvakakwana uye dzakatsetseka zvakakwana kuitira kuti ugone kufambisa wiricheya yako zviri nyore. Iwe unofanirwa kuve nenzvimbo yakakwana yekutsigira pasina kurova zvipingamupinyi uye unofanirwa kuve nenzvimbo yakakwana yekushanda zvakanaka uye kusanzwa kudzvanyirirwa. Nzvimbo dzakarukwa kana kongiri slabs dzinopa kudhonza kukuru, izvo zvinoita kuti kufambisa wiricheya kuve nyore.
Tafura uye Wall Gardens
Magadheni epatafura kana kuti mapindu akatwasuka akanakira vanoshandisa mawiricheya uye hari hombe kana zvigubhu zvinoda makadhi kuitira kuti zvifambiswe nekuiswa nyore. Mapoto anofanira kunge ari pasi pe 24 inches muhupamhi kuitira kuti ivhu risaoma nekukasira.
Mabhasikiti ekurembera akanakira varimi vewiricheya. Zvinotova nani kana vaine mapulley pamatengu kuitira kuti murimi wewiricheya agone kuasimudza kana kuadzikisa pasina kupfuudza. Iine pulley pamabhasikiti akarembera, unogona kugadzirisa zvidyarwa zvako kuti zviratidzwe pamatanho akasiyana.
Maturusi uye Kusvitsa Aids
Kana murimi webindu aine mashoma kufamba kwemaoko avo kana maoko, maturusi ane marefu akabata anoshanda chaizvo. Ivo vanofanirwa kuve nyore kushandisa uye kubata kwakanaka pazvibato. Chinhu chakareruka sekuvhara mubato nefuro uye tepi tepi chinoita kuti zvive nyore kubata. Velcro tambo pamaoko ako dzinobatsira kuwedzera kugadzikana.
Nemaoko nemaoko zvakatsigirwa zvakanaka, zvakawanda zvebasa zvichapinda mumidziyo uye kwete mumuviri wako. Kushanda kwemaoko kwakakosha kune chese chishandiso chinoshandiswa nemurimi wewiricheya. Edza kuchengeta maoko ako pedyo nemuviri wako uye usatambanudza maoko ako. Kana uchida kusvika, shandisa chombo chine mubato wakareba.
Iwe unofanirwa kugadzirisa gadheni rako kuti rienderane nezvido zvako. Iwe hauzodi maturusi akawanda kana ukagadzirisa gadheni kune zvaunoda chaizvo. Murimi wewiricheya anofanira kufungawo kushandisa ivhu rakapfava uye rakareruka. Izvi zvinoita kuchera nekudyara zvive nyore.